Laser hamboatra Sublimation Sportswear, Fitness Clothing, Hafanàm-po an Natonta Apparel - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Laser hamboatra Sublimation Sportswear, Fitness Clothing, Hafanàm-po an vita pirinty Apparel
Laser Vision nanapaka for Sublimation Apparel Industry
Hafainganam-pandeha avo Flying banjino ny sublimated horonan-lamba ka tafiditra ao misy shrinkage na nanova izay mety hitranga mandritra ny dingana sy araka ny marina sublimation hetezo misy teti-dratsy.
Loko-sublimation Trend no androahan'i Fashion, Fitness sy Sports Clothing orinasa.
Akanjo sy Accessories izay lamaody-nandroso, on-fironana raha miaraka amin'izay koa, aina sy Functional no nanenjika foana. Sublimated akanjo manome izay rehetra sy ny maro hafa.
Ny fangatahana ho an'ny tsy manan-tsahala toetra sy ny lamaody akanjo heviny ao amin'ny orinasa dia nandray anjara be dia be ao amin'ny lazan'ny sublimation akanjo. Tsy vitan'ny orinasa ny lamaody, fa na dia ny activewear, Fitness akanjo sy ny fanatanjahan-tena ary koa ny akanjo fanamiana indostria efa naka eritreritsika lehibe noho izany tantara loko-teknika sublimation fanontam-pirinty lehibe satria manome fahafahana customization amin'ny famolavolana Saika tsy misy fetra.
Ny mpanjifa ny showroom
Laser taom-piotazam-sublimation loko dian
Laser fanapahana no malaza indrindra fanapahana vahaolana ho an'ny orinasa sportswear. Amin'ny maha-mpitarika tamin'ny laser mpamatsy ho an'ny indostrian'ny lamba, Golden Laser nanomboka ny hafainganam-pandeha avo fahitana tamin'ny laser rafitra fanapahana ny hafainganam-pandeha ambony fanapahana sublimation lamba ao amin'ny horonana avy hatrany. Amin'ny zava-baovao foana, foana Golden Laser mifantoka amin'ny famoronana zava-dehibe ny ambony indrindra ho an'ny mpanjifa.
Mahazatra tamin'ny laser fampiharana ny sublimation sportswear
Jersey (basikety Jersey, baolina kitra Jersey, mpilalao baseball Jersey, matoanteny)
Dance Wear / Yoga anaovan'ireo
Laser hamboatra sublimation pirinty sportswear
Ny fahitana tamin'ny laser rafitra NANAPAKA automates ny dingan'ny nanapaka avy loko sublimation pirinty tapa-damba na lamba haingana sy marina tsara, na inona na inona ny fanarenana fanolanana sy ny eny anelanelany izay mitranga amin'ny miovaova na stretchy lamba toy ireo ampiasaina amin'ny sportswear.
Laser taom-piotazam-sublimation loko matoanteny Jersey
0.5mm nanapaka fametrahana mazava tsara
azo antoka tsara
ambany fikarakarana ny vola lany
Hahafantatra bebe kokoa momba fahitana tamin'ny laser cutter
Laser hamboatra sublimated activewear
VISION tamin'ny laser NANAPAKA dia tsara noho ny fanapahanao sportswear indrindra noho ny fahafahana hanapaka stretchy sy mora fitaovana nanova - mihitsy ny karazana izay azonao amin'ny fanatanjahan-tena akanjo (ohatra ekipa jerseys, swimwear sns)
Nahoana no mahasoa ny tamin'ny laser fanapahana?
- Izay rehetra mandeha ho azy, tsy vidiny
Sisin'ny nanapaka kalitao
Tsia, noho ny contactless tamin'ny laser fanodinana
Akisaho amin'ny fanazavana?
NY FOMBA VISION tamin'ny laser CUTTER asa?
ASA MODE 1
→ Notarafina ON ny lalitra,
Hanatsorana ny dingana famokarana iray manontolo. Automatic fanapahana ny horonan-taratasy lamba
Vonjeo fitaovana sy ny vola lany ny asa
Avo Output (500 karazana Jersey isan'andro isaky ny fiovàna - ihany ny boky)
Tsy maintsy sary antontan-taratasy tany am-boalohany
ASA MODELY 2
→ Notarafina fisoratana anarana marika
Fa malefaka fitaovana mora ny hanova, Curl, manitatra
Fa sarotra modely, akany modely ao amin'ny drafitra sy fametrahana mazava tsara fanapahana avo fepetra takiana
Inona avy ireo Vision Laser System Ny Lafitsara?
HD indostrialy fakan-tsary
Fakan-tsary banjino ny lamba, mamantatra sy manaiky pirinty contour, na hitondra marika eo amin'ny fisoratana anarana sy manapaka ny teti-dratsy voafidy amin'ny haingana sy araka ny marina.
Mazava tamin'ny laser fanapahana
Marina fanapahana amin'ny hafainganam-pandeha avo. Madio sy tonga lafatra notapatapahina sisiny - tsy reworking ny fanapahana farantsa ilaina.
Ny Vision Laser compensates rafitra hatrany na inona na inona fanolanana na eny anelanelany eo amin'ny misy lamba na lamba.
Conveyor rafitra sy ny fiara feeder ho tsara-mandeha ho azy tamin'ny laser fanodinana mivantana avy amin'ny horonan-taratasy.
Tsy fahazoan-dalana tamin'ny laser rafitra manaraka
fa ny nomerika vita pirinty sportswear orinasa:
Laser Golden dia lalina nisafo ny fangatahana fanodinana eo amin'ny sehatry ny sportswear, ary efa nandefa andianà mandeha ho azy tamin'ny laser fanodinana vahaolana mba hanatsaràna ny kalitaon'ny fikarakarana ny sportswear, mahatonga ny famokarana dingana tsotra, mamonjy be dia be ny asa sy ny fotoana lany.
Volamena CAM Camera fisoratana anarana Laser Cutter Machine
High Speed ​​Galvo & Gantry Laser Perforating sady niteti System
"Tsy misy zavatra haingana kokoa noho izao milina, na inona na inona no mora kokoa noho io milina!"
Inona no karazana tamin'ny laser?
Manana manontolo fanodinana tamin'ny laser teknolojia, anisan'izany ny tamin'ny laser fanapahana, tamin'ny laser sokitra, tamin'ny laser perforating sy tamin'ny laser marika.
Tadiavo ny tamin'ny laser milina
Izahao toetra ny fitaovana, manatsara ny dingana, manome lahatsary, fanodinana masontsivana, sy ny maro hafa, maimaim-poana.
Handalina ny fitakian'ny orinasa, miaraka amin'ny automated sy ny mahira-tsaina tamin'ny laser fampiharana vahaolana mba hanampiana ireo mpampiasa fanavaozana sy hampivelatra.